Imilenze evuvukile ezinjeni, ziphathwa kanjani? | Izinja Umhlaba
Imilenze evuvukile ezinjeni
I-Encarni Arcoya | | Curiosities, Izinja ezijwayelekile
La ukuvuvukala kwezidladla ezinjeni, Kuyinkinga ejwayelekile kulezi zilwane. Futhi yize lesi sifo singeyona ingozi noma siyabulala, ngokuya ngezimbangela, singase singakhululeki futhi sibe buhlungu, ngoba njengoba kufanele sicabange, izinselo zenja ziyindawo ebucayi kakhulu.
Ngokuvamile, imilenze evuvukile ikhona kubangelwe ngumzimba wangaphandle lokho kubanjwa phakathi kwamaphakethe akho noma izinzwane zezilwane. Ngendlela efanayo, zingaba izimbangela ezijwayelekile, amanxeba, iminwe ephukile noma izipikili, ukukhotha njalo nokuluma le ndawo, noma ukulunywa izinambuzane. Kubaluleke kakhulu ukuthi lapho kuqala uphawu lobuhlungu noma ukukhubazeka engxenyeni yesilwane, sizame ukuhlola izinselo zaso, ukubona ukuthi kwenzekani kuso. Uma singatholi lutho ngeso lenyama, kodwa siqaphela ukuthi ubuhlungu buyaqhubeka, kufanele sibuthathe ngokushesha ngangokunokwenzeka kudokotela wezilwane ukuze enze izivivinyo ezifanele.
Ukuhlinzeka izilwane zethu ngokushesha Sincoma ukuthi ulandele lezi zinyathelo ezilandelayo: okokuqala kumele uhlole ukuthi izinyawo zakho azinalo uhlobo lwento ebhajwe phakathi kwezinzwane zakho noma amaphedi. Ngemuva kwalokho, hlola ukuthi awekho amanxeba okubhoboza noma uhlobo oluthile lokulunywa yizinambuzane okungenzeka kubangele ukungakhululeki.
Uma ungaboni noma yiluphi uhlobo lwe- inkinga noma into ebanjwe ezinyaweni zakhoHlola umlenze wesilwane ukuqinisekisa ukuthi awanalo uhlobo lwento olungadala ukuvuvukala nobuhlungu. Faka inselo yenja ukucwilisa isisombululo sikasawoti wamaminerali, ngamanzi afudumele ukuhlanza isilonda (uma sikhona) nokunciphisa ukuvuvukala. Uma ubona ukuthi kukhona ukulimala noma isilwane sakho siqhubeka nokuxhuga, kufanele ushayele udokotela wezilwane ukuthi ancoma ukuthi yini okufanele ayenze noma ayise kuye ngokushesha okukhulu.
1 Kuyini ukuvuvukala kwezidladla zezinja?
2 Ziyini izimbangela zezidladla ezivuvukele?
3 Ungazivikela kanjani izinyawo ezivuvukele ezinjeni?
4 Ungazilapha kanjani izidladla ezivuvukele?
4.1 Ivuvukele imilenze ngenxa yomgogodla
4.2 Imilenze evuthayo ngenxa ye-pododermatitis
4.3 Imilenze evuthayo ngenxa yesifo samathambo kanye / noma i-osteoarthritis
4.4 Imilenze ivuvukele ngenxa yokungezwani komzimba
Kuyini ukuvuvukala kwezidladla zezinja?
Imilenze yezinja ngokungafani nezinyawo zethu, zingamalungu entekenteke omzimba wakho, okungalimala ngezimbangela eziningi.
Ukububula lapho uthinta indawo
Ukulahleka kwengxenye yesikhumba
Uquqaba lwangaphandle emilenzeni noma kwizicubu
Nakhu okudingeka ukwazi ngezidladla ezivuvukile.
Ziyini izimbangela zezidladla ezivuvukele?
Imilenze evuvukele akusona isifoEsikhundleni salokho, zithathwa njengesimo sesikhashana, kanjalo nomkhuhlane noma ukukhwehlela. Yingakho kungekho sizathu esisodwa sokuvuvukala ezinyaweni zenja.
Noma kunjalo, kukhona izici eziningana lokho kungadala ukuthi izidladla zenja yakho ziqale ukuvuvukala futhi ziyilokhu okulandelayo.
Ukuzilimaza: Ngokuvamile, izinja zivame ukukhotha noma zilume izidladla zazo. Kodwa-ke, ezimweni eziningi kungenzeka ukuthi ukuxubha okuqhubekayo noma ukusetshenziswa kwamandla amaningi kubangela ukuba imilenze iqale ukuvuvukala.
Izinto eziyinqabaIzinja, ngokungafani nathi, zinezinyawo ezingagqokile ngaso sonke isikhathi futhi ngaphandle kokuthi ama-pads ezinyawo zawo avikela ulwelwesi oluphakathi kwazo, zisengozini yezici ezahlukahlukene zangaphandle.
Izinto ezinjengezingcezu zengilazi, amatshe ngisho naphansi kakhulu Kungadala izidladla zenja ukuvuvukala. Kwenzeka okufanayo namathoyizi ezingane, izinto zasekhishini ezibukhali, ubucwebe, njll.
Izilwane: Ezinye izilwane zingadala izidladla zenja yakho ukuvuvukala, njengezinambuzane. Ngokuvamile, izinambuzane zivame ukuluma izinja, ngoba zihlala zixhumana nemvelo. Ngakho-ke ukulunywa yizinambuzane kungakuguqula kusuka kokuncane kuze kube ukuvuvukala okukhulu.
Ezinye izilwane zingadala izinselo zenja yakho ukuvuvukala, ngokwesibonelo, uma unezinyoni endlini futhi zinolaka, zingayikhonkotha inja yakho. Ngokufanayo, izilwane ezifuywayo zivame ukuzilimaza lapho zidlala, ngakho-ke izinja zezinja zakho zingavutha.
Amanxeba: Amanxeba angumphumela wezimbangela eziningi ezingenhla futhi ngokuyisisekelo ahlanganisa cishe zonke ezinye izimbangela zezidladla ezivuvukele. Njengasemzimbeni wethu, isilonda singenza umlenze wenja yethu uvuvuke, ubangele ubuhlungu obukhulu.
Umzimba: Kunezinhlobo zezinja ezithandwa kakhulu kunezinye ezinokuvuvukala ezinsikeni, ngoba izidalwa zazo zingaletha izimo ezenza lesi simo esibuhlungu sithambekele. Lokho kungaba: ukwehla kwehomoni yegilo, ukwanda kwezinga lama-steroids, ukuphazamiseka kwamahomoni, njll.
Ezinye izimbangela: Amagciwane, isikhunta, izimuncagazi, ukuhlanzwa kahle kwesikhumba, umdlavuza, izigaxa kanye nezicasuli emvelweni
Ungazivikela kanjani izinyawo ezivuvukele ezinjeni?
Ngokuyinhloko kuningi izinto ezingadala ukuvuvukala kwemilenze ezinjeni futhi zingaphuma ezandleni zethu. Kodwa-ke, ekhaya kunezinto ezithile esingazisebenzisa ukwenza isiqiniseko sokuthi imilenze yezinja zethu ayivuvuki futhi yilezi ezilandelayo:
Bheka Inja Yakho Njalo: Awudingi ukuthi inja yakho igule ukuze ihlolwe, ngakho-ke zama ukulihlola okungenani kathathu ngesonto ngokucophelela futhi wenze ukuskena okusheshayo komzimba wakho nsuku zonke. Lokhu kungenxa yokuthi yize izidladla ezivuvukele zitholwa ubuhlungu benja, kunezifo eziningi eziletha izimpawu zize zithuthuke kakhulu, ngakho-ke ungagwema inhlekelele ngokuvikela.
Hlola kahle lokho azikho izinto zangaphandle phakathi kwamaphakethe nokuthi alunalo uhlobo lokuluma noma lokulimala. Imilenze yenja yakho imvamisa inenqwaba yemfucumfucu, ngakho-ke kubalulekile ukuthi uyinyakazise kancane ngaphambi kokulala, njengoba eminye yayo ingangena kulwelwesi noma emapayipini.
Ungayinakekela kanjani amaphedi enja?
Ungashiyi izinto ezibukhali phansi: Khumbula lokho izinto ezibukhali zingalimaza ezinsikeni zenja yakho, ngakho-ke zama ukugwema ukushiya izinto owaziyo ukuthi zingamlimaza phansi. Ngokunjalo, uma uhamba naye, gwema izindawo lapho phansi kugcwele kakhulu noma lapho kunenqwaba yemfucumfucu, njengoba ezinye zingangena emilenzeni yayo.
Vakashela udokotela wezilwane: Khumbula ukuthi kunezimbangela zezinto eziphilayo ezingadala izinyawo ezivuvukele enjeni yakho, ngakho-ke kunconywa ukuthi umyise kudokotela wezilwane kaningi, njengoba ungavimbela isifo noma isimo esikhudlwana.
Bheka indlela aziphethe ngayo: Uma inja yakho ikhotha kakhulu noma ihlafuna kakhulu izinselo zayo, kungenzeka ukuthi kukhona okumphethe kabi endaweni. Ungakuthathi njengokuziphatha okujwayelekile futhi uhlale njalo qaphela zonke izimpawu ukuthi inja yakho ikhona, njengoba ingakhombisa ukuthi kukhona okulimaza izidladla zayo.
Ungazilapha kanjani izidladla ezivuvukele?
Lapho usuzazi ukuthi ziyini izimpawu, izimbangela nokuvinjelwa kwezidladla ezivuvukele, sekuyisikhathi sokuthi wazi ungayiphatha kanjani le nkinga.
Into yokuqala okufanele uyenze, lapho uqaphela ukuthi inja yakho ivuvukele izidladla, yi- hlola kahle ukuthi yini imbangela lokho kubangela lokho.
Uma kungaphakathi kwekhaya lakho futhi kuyimbangela engavikeleka, susa zonke lezo zinto ezibangela ukuvuvukala, ukuze kungaqhubeki kuqhubeka.
Uma izinselo zenja yakho zinemizimba yangaphandle, njengama-chips, amakristalu noma amatshe, zisuse endaweni bese uyibulala amagciwane. Uma uqaphela ukuthi indawo imnyama noma iphephuli noma ukuthi phakathi nezinsuku ishintsha umbala, iya ngokushesha kudokotela wezilwane njengoba lokhu kukhombisa ukutheleleka.
Uma ubona izigaxa noma izicubu ezincane emilenzeni, ungazami ukuzisusa ngokwakho, ngoba lokhu kufanele kwenziwe ngokuhlinzwa ngudokotela wezilwane.
Uma ubona ukuthi unesilonda esingajulile, sebulala amagciwane endaweni bese uyihlanze kahle. Uma izilonda zijule kakhulu noma zivezwe kakhulu, bheka udokotela wezilwane ngokushesha.
Indlela enhle yokuhlanza isidladla esinegciwane isisombululo sikasawoti. Isixazululo seSaline isihlanza esihle kakhulu esingabangeli imiphumela emibi futhi kulula kakhulu ukusithola kunoma iyiphi ikhemisi.
Musa ukufaka amaphilisi noma okunye ukudambisa izinhlungu ezinqeni zezinja zakho, njengoba ungazi ukuthi umzimba wazo ungasabela kanjani. Uma usuvele usususile imbangela yokuvuvukala, ubuhlungu buzodlula ezinsukwini.
Uma uqaphela ukuthi umlenze wenja yakho usavuvukile noma awukwazi ukuthola imbangela yokuvuvukala, bheka udokotela wakho ukuze ahlolwe ngokuphelele.
Futhi hlola wonke umlenze wenja yakho, ngoba imbangela ingaphakama kancane futhi uqiniseke ukuthi alukho uhlobo lokulimala.
Uma imbangela kuyisilonda, musa ukubulala amagciwane endaweni bese uyimboza noma uzame ukuyivala ngokwakho, uma kungenzeka ukuthi inkulu kakhulu.
Khumbula ukuthi ukwelashwa okuyinhloko kwezidladla ezivuvukile yi- ukuvimbela. Ulwelwesi oluphakathi kwezinzwani zezinja zakho lubucayi kakhulu futhi yize luvikelwe yimipayipi, lungahle lube sengozini yokulimala.
Uma ungeke ukwazi ukususa into ebangela ukuvuvukala kwezinselo zenja yakho, yise kudokotela wezilwane, njengoba amanxeba nezimbangela zezinto eziphilayo kumele zinakekelwe ngochwepheshe. Gwema ukusebenzisa amafutha okugcoba, i-anesthesia noma okhilimu bezinhlungu, ngoba umzimba wenja yakho awufani nowethu, ngakho-ke ungadala ukusabela okungafanele.
Ivuvukele imilenze ngenxa yomgogodla
Njengoba sibonile, kunezizathu eziningi zokuthi kungani inja ingahlupheka, kukho konke ukuphila kwayo, kule nkinga yemilenze. Kodwa-ke, abanye banesixazululo esingcono kunezinye, futhi kuzodingeka ukuthi ubhekane nezimo ezinjalo.
Ngalesi sizathu, sifuna ukukunikeza indlela yokwenza ngokubhekana nezinto ezivame kakhulu ezihlobene nezidladla ezivuvukele ezinjeni. Futhi into yokuqala ingahle ibangelwe ukujija.
Njengabantu, izinja nazo zingakwazi ukulimaza imilenze yabo ngesinyathelo esibi. Ukuphambuka, ukunyakaza okungazelelwe ... kungadala ukuthi imisipha yejoyini, kanye nemicu yemisipha, icindezeleke ize iyephuka ngokwengxenye noma ngokuphelele. Futhi lokho kungadala, ngaphezu kobuhlungu, iqiniso lokuthi imilenze ibizokhukhuma. Inja yakho izokuxwayisa, okokuqala ngokuvuvukala, kepha izophinde ixhuge, izoba nokuzwela okuningi endaweni (ekuvimbele ukuthi ungayithinti) futhi izocindezelwa kakhulu ngenxa yobuhlungu obuzwayo.
Yini okufanele uyenze uma inja yakho ivuvukala umlenze ngenxa yomgogodla? Kulokhu, isisombululo esizedlula zonke ukumyisa kudokotela wezilwane ukuze ahlole ukugula futhi azi i- degree of sprain onayo (Kwezinye izimo kudinga ukuhlinzwa uma kubucayi kakhulu). Lokhu kunganqunywa nge-palpation ne-x-ray yezidladla. Ngemuva kwalokhu, into ejwayelekile kakhulu ukuthi udokotela wezilwane anikeze uchungechunge lwemithi ezokwehlisa izinhlungu futhi inciphise ukuvuvukala. Ngaphezu kwalokho, kufanele ibe ekuphumuleni okuphelele izinsuku ezimbalwa futhi, ngemuva kwalokho, ikuthathe ikubuyekeze ukubona ukuthi iyaphola yini.
Imilenze evuthayo ngenxa ye-pododermatitis
Esinye isifo esichaza ukuvuvukala kwemilenze ezinjeni yilokho okuthiwa i-pododermatitis. Kuyinto yokuvuvukala eyenzeka ezindaweni ezihlukanisiwe emilenzeni, okungukuthi, eduze kwalapho kukhona khona amapayipi neminwe yakho. Imvamisa, lokhu kungenxa yokuthi uthinte okuthile, umzimba wakwelinye izwe ubethelwe noma ulimele kuleyo ndawo. Kuvamile kakhulu ezinjeni ezijwayele ukugijima kakhulu, zeqe noma zizingele, ikakhulukazi uma zidlula emasimini noma lapho umhlabathi ungcolile futhi amatshe, ameva, amakristalu, njll.
Phakathi kwezimpawu ezizokukwenza usebenze, iqiniso lokuthi kukhona ububomvu kuyo yonke indawo yomlenze, kanye nokuvuvukala, izigaxa ezincane, amanxeba, ukukhubazeka ... Konke lokhu futhi kungaba yinkinga yokungahambi kahle kwegazi , ukuhlukumezeka (kusuka ekushayweni), kusukela ekuweni ... Ngakho-ke, into enhle kakhulu ongayenza ukuya kudokotela wezilwane ukuze ahlole ukulimala. Lokhu okuzokwenza ukubuka kahle umlenze, kwesinye isikhathi ngisho nedivayisi yokusondeza uma kungenzeka inento ebambekile, noma ngesinye isizathu.
Ngokuvamile, uma i-pododermatitis ivela emilenzeni eminingana, kulula ukunquma ukuthi ubhekene nale nkinga, kepha akudingeki. Ngakho-ke, kungcono kakhulu ukuhlola isikhumba noboya endaweni ukuthola izimuncagazi kanye nokuhlolwa kwegazi ngisho ne-biopsy.
Ngokuphathelene nokwelashwa kwayo, lokhu kuqukethe ama-antibiotic, uma kuvela kumabhaktheriya; ama-antifungal, uma kukhona isikhunta, noma ama-antiparasitics uma kukhona ama-parasites. Uma ikhiqizwa ngumzimba wangaphandle, indawo iyasuswa ihlanzwe, kunikezwe izinsuku ezimbalwa zemithi elwa namagciwane ukuze ingatheleleki.
Ukucindezela okubandayo, i-serum kanye nensipho emnene Zingaba ezinye izindlela zokunciphisa inja ebuhlungwini engabuzwa.
Imilenze evuthayo ngenxa yesifo samathambo kanye / noma i-osteoarthritis
Ngeshwa, izinja nazo zingaba nesifo samathambo kanye / noma i-osteoarthritis ezimpilweni zabo zonke. Cishe ivele njalo eminyakeni yobudala, kepha akusho ukuthi abantu abasha abakwazi ukuhlupheka ngakho. Futhi esinye sezimpawu ukuthi imilenze yayo izovumbuluka ngezikhathi eziningana. Ubuhlungu, isifiso esincane sokuphuma, ukungabi nesifiso sokudla, njll. zingaba yizimpawu zokuthi kunenkinga.
Futhi, inketho enhle onayo ukuya kudokotela wezilwane ukuze, ngokusebenzisa i- ukuhlolwa kwegazi kunquma izinga le-arthritis kanye / noma i-osteoarthritis ukuthi inja inayo futhi ikunikeze umuthi wokuyinciphisa ngandlela thile, noma ukuzama nokuyeka noma ukubambezela inqubekela phambili yayo.
Alikho ikhambi lalesi sifo, kepha ama-palliatives asiza ukubhekana kangcono nakho. Amaphilisi e-Hyaluronic acid kanye nama-anti-inflammatories athile angakusiza ukukhulula ezikhathini ezibucayi kakhulu lapho inja yakho isezinhlungwini futhi ivuvukile imilenze. I-Hyaluronic acid ingathathwa isikhathi eside ngoba iyisisekelo sokunciphisa imiphumela yesifo.
Kodwa-ke, maqondana ne-anti-inflammatory, akukhuthazwa ukuthi uyihlukumeze ngoba, ngokuhamba kwesikhathi, iyoyeka ukusebenza futhi kube kubi kakhulu esilwaneni esimpofu.
Imilenze ivuvukele ngenxa yokungezwani komzimba
Ekugcineni, sizokhuluma nawe mayelana nendlela yokwelapha izidladla ezivuthayo zenja lapho zibangelwa ukungezwani komzimba. Imvamisa, ukungezwani komzimba okudala imilenze ivuvuke kungenxa yokuthi kudlule endaweni lapho ukugcotshwa kukhiqize khona ukusabela emzimbeni wayo. Ngokuqondene nobuhlungu, abuvamisile ukuba nokuningi, futhi yize kungamkhathaza, akakugweme ukuthi ungayithinta le ndawo, yize kuzoba buhlungu.
Kungaba futhi ngenxa yokulunywa yizinambuzane noma ngisho nokudla okudlile futhi okungezwani nakho, ngakho-ke izidladla ezivuvukile zingaba uphawu lwezinkinga.
Kunoma ikuphi, into yokuqala okufanele uyenze geza ngamanzi, futhi uma kungaba ngensipho, yonke indawo ngenhloso yokuqeda into engadala inkinga. Ezimweni eziningi, uma lokhu sekwenziwe, futhi ngemuva kwamahora ambalwa, ukuvuvukala kuyanyamalala. Kepha, uma kungenjalo, noma isilwane sakho sinenkinga yokuphefumula, senza okungalungile noma uqaphela ukuthi umphimbo wakhe uyavuvukala, futhi kuzofanele uye kudokotela wezilwane futhi uphuthume.
Lokhu kuzohlola umlenze ukubona ukuthi ngabe kungenzeka yini ukuthi kufakwe umzimba wangaphandle odala ukuvuvukala. Angase akhiphe ukwelashwa okuthile, kungaba ngokhilimu noma amaphilisi anjenge ama-antihistamine noma ama-glucocorticoids, ukubona ukuthi isilwane sisabela kanjani nokuthi ukuvuvukala kuyaqala ukunyamalala.
Vele, akusho ukuthi kubalulekile ukuthi wazi ukuthi inja yakho iyaliwa yini ukuze ugweme ukuyibeka esimweni esifanayo futhi. Kwesinye isikhathi ukungezwani komzimba kungaba mncane, kepha lokhu kubucayi kakhulu ngokuya ngokuthi isilwane sakho siziphatha kanjani.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Curiosities » Imilenze evuvukile ezinjeni
U-Arleen Gonzalez kusho
Umdlwane wami uyi-Yorkshires, unesidladla sangemuva esivuvukele futhi udokotela wezilwane akayitholi imbangela, manje waqala kwenye induku, ngimthumelela i-steroids, ngilungisa umlenze wakhe nsuku zonke kanye namafutha ane-Betamethasone. Ngiphelelwe yithemba, ngicela umuntu angangisiza ngiphilise i-patica yakhe? Ngiyabonga !!!
Phendula u-Arleen González
Njengamanje kwenzeka into efanayo kimi nomdlwane wami waseYorkshire futhi kwenzeka ezinzwaneni zakhe zangaphambili. Engikwenze izolo okuqalile: Linganisa indawo. Vumela inqina licwilise usawoti namanzi afudumele umzuzu, ngoba ayisabambi. Le nqubo kathathu ngosuku. Kamuva, ngayihlikihla ngokotini owawunotshwala (yangiluma ngoba yayinenhlabathi eyayivuliwe), ngayifaka futhi kasawoti. Ngomise umlenze ngesomisi sezinwele futhi somile kakhulu, ngafaka ukhilimu wesenzo kathathu: i-antibiotic, anti-inflammatory kanye ne-antifungal. Ngafaka i-gauze elisekelwe ngesiponji emaphaketheni akhe ezinyawo, ngenza i-bootie njengoba yayinjalo, futhi ngamboza konke ukuze kungaqhamuki iteyipu. Futhi manje, ngosuku lwesibili lokwelashwa, indawo evuvukele ayisabomvu futhi iyoma, njengokungathi iyaxebula leyo ndawo. Futhi uyahamba agijime ... uyangikhotha engibonga futhi engikhonkotha ngoba efuna ukuyozihambela nje ... kodwa ngisamlayishile. Ngiyesaba ukuthi izokheleka. Ngizodlulisa izinsuku ezi-3.
Angikwazanga ukumyisa kudokotela wezilwane ngoba lapho ngihlala khona bahambela kuphela uMgqibelo emini bese belinda kuze kube uMsombuluko, ngiyafa ...
Ngiyabonga Fiorella! Umbuzo owodwa, uphonse hlobo luni lomkhumbi emanzini ????
Ngiyabonga Fiorella !!!! Umbuzo owodwa, iyiphi oyiphonse emanzini ???
Sawubona Fiorelka, bengifuna ukukubuza ukuthi ngubani igama le-anti-inflammatory kanye ne-antimiotic, ngoba umdlwane wami, uyi-Maltese Bichon, uthole ukushaywa komunye umdlwane futhi ingxenye yethanga lakhe ibuhlungu futhi ngicabanga ukuthi ivuvukile little futhi uyakhononda, ngingakuthokozela ukuthi uzongeluleka futhi unginike amagama okuzokuphatha, ngiyabonga futhi okuhle kakhulu.
Inja yami inemilenze emine evuvukile, iyi-rotweiler eneminyaka engu-8 ubudala, ihamba kancane futhi idla kancane. Njalo lapho ibuye iquleke. Udokotela wezilwane wafika kuphela wamnika isisu kodwa akazange athuthuke. angazi ukuthi ngenzeni Ngiyabonga
Sawubona, nginomdlwane okuthiwa uTedie, izidladla zakhe zivuvukele kakhulu, unonyaka owodwa ubudala, asazi ukuthi senzeni.
Ngiyaxolisa ukukutshela ukuthi iYorkie yami ishone ngoLwesithathu, Mashi 09, ngesikhathi ineminyaka eyi-9 impela, akekho owelaphe umlenze wayo, ngicabanga ukuthi imithi ithinte isitho esithile futhi ithole isifo esimbulele ... Ngikhulumile nomngani wami ongudokotela wamazinyo futhi ungitshela ukuthi kubantu lapho imilenze ivuvukile kuba izinso, ngicabanga ukuthi i-septicemia ifikile futhi bekungekho okumele kwenziwe, ngiphakamisa ukuthi bahlolwe ngokuphelele igazi ukuze kukhishwe izinso, isibindi njll. Ngikhungathekile.
sawubona, imilenze yami emi-4 yenja ivuvukile. Zivuvukele kahle nezinzipho kubukeka sengathi zizowa. Uyagula futhi akafuni ukudla lutho. Simnike amavithamini futhi simelapile imilenze ngoba unezilonda ezithile. kepha kusafana. Angazi ukuthi izoba nani ???
Sawubona, ngineMalta futhi imilenze yakhe ivuvukile futhi ibomvu kahle, ngiyayihlanza futhi ngiyinikeze isibulala-magciwane kodwa ukuvuvukala akwehli futhi kubuhlungu, uma othile engangitshela ukuthi yini enye engingayenza ngingakuthokozela. Ngiyabonga
Sawubona Jeny. Igama lami nginguClaudia, inja yami ibinento efanayo, ibisemilenzeni yangaphambili, ngiyigeze kuqala ngamanzi afudumele, hhayi ashisayo. Ayikho insipho, bese ngiyomisa kahle udokotela wezilwane wangitshela ukuthi ngimhlikihle ngobumnene ngamabili iphesenti i-iodine kuze kususwe ukuvuvukala nombala opinki wemilenze yakhe futhi ngizokutshela ukuthi bekuphakela ngoba phambilini ngangimenzele i-vetcuten no-hexider cream futhi akukho okwakushibhile kunakho konke ayengiphakela khona, ithambo amaphesenti amabili iodine. Att claudia kusuka eColombia.
Ngiphakamisa ukuthi uye kuDog Dr Dog uyocela ukuhlolwa igazi ukuze ubone ukuthi izinso zakhe zilungile yini
Ngibonga uClaudia ngokuqondiswa, inja yami yawela emlenzeni wangaphambili yavuvukala
Naily anthonela kusho
Sawubona, ngicela ungisize noma ungincome ukuthi nginike noma ngenze umdlwane wami emlenzeni ongemuva ukuthi imoto igijime phezu kwakhe nomlenze wakhe ushayiwe, ungangincoma, ngiyabonga
Phendula uNaily Anthonela
UJulien Noguera kusho
Sawubona, inja yami inezinyanga ezi-4 nohhafu izelwe futhi ithanga layo ekuqaleni lavuvukala, lapho-ke ukuvuvukala kwaqala ukukhula kanti namhlanje uvuke ngomlenze onzima akasakwazi ngisho nokuvuka ... kungasiza yini umuntu mina ngiyacela !!
Phendula uJulien Noguera
Imilenze yenja yami ivuvukile futhi ihlukaniswe kahle kepha iyakwazi ukuhamba noma ngabe yini kodwa okumangaza kakhulu ukuthi ikwazi ukuhamba ngokujwayelekile
I-Terramycin ilungele kakhulu ukutheleleka ngezinyawo
Isifutho se-Terramycin sokusetshenziswa kwezilwane Ekwelapheni izilonda ezingaphezulu kwazo zonke izinhlobo zezilwane ezinezinyawo kanye nezifo zokuhlinzwa I-Zoetis Laboratories cela kudokotela wezilwane
Sawubona, inja yami encane isivele yavuvukala isikhashana, yi-doushaund, sebevele benziwe izivivinyo futhi isebenzisa i-shampoo eningi ngesimo sayo, ngisho nokudla kungokwesifo somzimba futhi akuphulukisi, mhlawumbe into elula kunazo zonke uzokwenza.
Nginomdlwane onezinyanga ezingu-9 ubudala, uyisiphambano esiphakathi kwe-pitbull ne-American buling futhi izidladla zaso zangaphambili ziyavuvukala… ikhala kakhulu, ibuhlungu… ngicela, ngabe othile angangitshela ukuthi yini engingayenza…
Igama lenja yami nguBooties futhi imilenze yakhe ivuvuke kakhulu, namanje akaphumi ngaphandle kokwelashwa kwezilwane ayekuyalile, ngoba kathathu nge-antibiotic, antihistamine nokunye, kepha njengoba kungapheli ezinsukwini ezimbili, namuhla ngisebenzise IMITHI yasekhaya isebenze ikhabhoni, futhi sengivele ngamnika yona ngoba ngokusho komakhelwane bathi inja ingafa nemikhosi iya kuze kube uLwesibili lapho amakhemisi evula bese ngihlala eceleni komgwaqo.
Inja yami inenxeba ngemuva komlenze ojulile, wayiphilisa, ngafaka i-gauze nge-espadrille ukuyivikela ngaphandle kokuyicindezela futhi yafaka isandla sayo ukuthi ngiyakwazi ukuyenza.
Igama likaLabrador wami ngu-Airon futhi uneminyaka eyi-11 futhi isikhashana ubelokhu eba mubi kakhulu ngezidladla zakhe zangaphambili, amaphakethe akhe avuvukile futhi lokhu kumholele ekuhlukaniseni iminwe yakhe, ngamyisa kudokotela wezilwane. Kepha ngikhathazekile ngokuvuvukala kwezandla okuya ngokuya kuba kubi. Yini engingayibeka
Odokotela bezilwane kufanele bashicilele ngobungozi bezinja ezindaweni ezinamahlathi lapho iminyovu, izintuthwane nezinye izinambuzane ezinobuthi, izicabucabu zigcwele khona, bese UCWANINGA inyoka ebolayo nemiphumela yayo ekuxhumaneni nezandla nezinyawo zezinja.
Imiphi imithi efaneleke kakhulu ukuqala ekhaya ngenkathi uthola usizo lweProfesionak.
Sawubona, ntambama enhle, ngine-mini shnauzer futhi wephule isipikili emlenzeni ongemuva wangakwesokunxele futhi kubuhlungu lapho ebeka umlenze wakhe phansi futhi njengoba lapho engadli khona futhi echitha ukuhlanza akudlayo, yini engingayenza ? Ngiyabonga
Into yokuqala okufanele uyenze ukumyisa kudokotela wezilwane, ngoba ucezu lwesipikili kungenzeka ukuthi lwalusele ngaphakathi enyameni futhi kungenzeka ukuthi lwangenwa yilo.
Iseluleko sami ukuthi umyise kudokotela wezilwane ngokushesha okukhulu.
USebastian Elgueta Lopez kusho
Sawubona, ngine-basset hound enezinyanga ezi-4 ubudala futhi ngidlala ngephutha naye nginyathela ingaphambili langaphambili lakwesokunxele kakhulu. Wadazuluka wakhala kakhulu, ngakho-ke wayiswa kudokotela wezilwane, owamhlola futhi wakhipha isinqumo sokuthi akonakele lutho. Ufake umuthi wokulwa nokuvuvukala wamshiya ngokufana, kodwa kumaphilisi izinsuku ezi-5. Izinsuku ezi-2 zidlulile futhi umdlwane wami usaxhuga, awukhonondi lapho uhamba futhi unomoya omuhle. Uyadla futhi aphuze amanzi ngaphandle kwezinkinga, kodwa uyaxhuga futhi azame ukungawusekeli umlenze wakhe othintekile. Ngikhathazekile kakhulu, ngifisa sengathi ungangiqondisa. Ngiyabonga.
Phendula uSebastián Elgueta López
Kwesinye isikhathi sikhathazeka kakhulu ngezethu ezinoboya 🙂. Kujwayelekile impela, futhi kukhombisa ukuthi sibathanda kangakanani.
Kepha yebo, unyawo lubuhlungu kakhulu, kepha uma kungekho ukuphuka, njengoba izinsuku zihamba, bayalulama ngaphandle kwenkinga.
Phendula uMonica Sánchez
Sawubona ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ku-pit bull wami oneminyaka emibili ngabona ukuthi ibingasukumi futhi ibikhala futhi nemilenze yayo ibivuvukile sengathi inoketshezi ngaphakathi, ngayihambisa kudokotela wezilwane bahlola bathole ukuthi ubene-hedgehog, kuhle Kube ukwelashwa okude kusukela lapho futhi kuyiphupho elibi impela, manje useluleme impela, kepha kusukela izolo ngiyabona ukuthi uzizwa ephansi emoyeni, umzimba wakhe uyathuthumela, imilenze yakhe ayithathi yazi ukuthi kungumbono wami yini kodwa ngibabona bevuvukile kancane futhi ngiyesaba ukuthi uzobuyela futhi, udokotela wezilwane ombona wancoma ukuthi ngimjoje ngomuthi okuthiwa awulashwa, abangitsheli igama kodwa kuthiwa uyamenza hlanza igazi le-hedgehog nokuthi uzonikezwa njalo ezinyangeni ezimbili, okungelona ikhambi, kumane kumgcine elele futhi ahlanze negazi, izolo umnikeze lowo mjovo njengoba ngesaba ukuthi uzophinde agule, yamukele, wangixwayisa ukuthi mhlawumbe uzokhulula ngegazi elincane, noma avote igazi elincane ngamakhala akhe kodwa abe po Ngoba i-hedgehog ivuselelwa kabusha ukuze ishiye umzimba, ngabe kukhona owaziyo ngalo muthi? noma ngabe kukhona udokotela wezilwane lapha ongitshela ukuthi ngabe kuliqiniso ngalowo muthi oyimfihlakalo, bathi misha futhi odokotela bezilwane abakhethi ukutshela amaklayenti abo njengoba kubiza kakhulu futhi abantu abaningi abaziphathi izinja zabo eziphethwe yi-hedgehog njengoba kunjalo kufanele, ngoba ukwelashwa kwe-hedgehog kubiza kakhulu, ngamagama ambalwa udokotela wezilwane wangitshela ukuthi akavamile ukutshela amakhasimende akhe ngalo muthi ngoba bayazi ukuthi uma bekwazi ukwelapha izilwane zabo ezifuyile ngalesi sifo abazokwazi bakhokhele lowo mjovo omusha, nokuthi bawusebenzisa kuphela ezimeni ezimbi kakhulu nakumakhasimende afuna ukubona izilwane ezifuywayo ziphilile ezikhathalele ngempela.
u-alejandro zuñiga kusho
Ikhambi elingcono kakhulu lokuvuvukala nokulunywa kwamabhere akho yileli elilandelayo:
isipuni esikhulu sama-oats emvelo + isipuni nengxenye yesoda yokubhaka egayiwe kahle kakhulu ku-blender, bese ufaka amanzi anele ukucwilisa isidladla.
cwilisa inqina yenja kusixazululo imizuzu emihlanu kuya kwengu-5 bese uvele ususe umswakama owedlulele ngethawula. Kunconywa ukubeka ikhola lika-Elizabethan ngenkathi uthola ukwelashwa, kuzokusiza kakhulu ukunciphisa ukuvuvukala nokunwaya le ndlela yokwelashwa kunconywa ukuthi uyisebenzise izinsuku ezintathu kuya kwezine ngesonto futhi uzobona intuthuko enkulu esilwaneni sakho, ngiyethemba kuyasebenza
Phendula ku-alejandro zuñiga
Carolina ukuhambisana namanye amagama kusho
Sawubona, nginemidlwane emi-2 futhi ngeshwa namhlanje kushone eyodwa, ibibuye igule ngenxa yemikhaza, bekungekho ndlela yokuyiqeda, simnike umuthi wokugoma futhi umyeni wami ubezinikele ekuwahlanzeni nasekufakeni uketshezi ukuwaqeda , kepha ubedla kancane kancane futhi ancipha, kakhulu kuze kube namuhla ushonile ekhathele futhi enemilenze evuvukele, nginowesifazane kuphela. Kepha ngidinga ukuthi ungisize, ngenzenjani ngemikhaza yokuyiqeda ngoba iyanda futhi iyavela.SIZA !!!
Ngine bulldog yesiNgisi Imilenze yakhe ivuvukele. Ngabeka amanzi afudumele ngeviniga nosawoti see like. Bayancipha ngokuncane kepha ngabuye ngaqhubeka
Isithwathwa sikaSofia kusho
Izidladla zenja yami encane zivuvukile futhi zibomvu futhi, kubuhlungu uma sithinta isidladla sayo nayo iyakhala
Futhi uyaxhuga, angazi ukuthi unani, ngingamfaka umuthi wokugcoba, kepha kubonakala sengathi uvuvukele kakhulu futhi bengingazi kuze kube manje ukuthi ngifunda ukugwema ukufaka amafutha okugcoba nezinhlungu.
Phendula uSofia Frost
Sawubona, nginomalusi waseJalimane oneminyaka engu-6 omlume kabi kakhulu, ngamthatha amahlandla ama-2
I-X-ray, njll ... akukho lutho no-bitch ngokufanayo lapho izama ukuqonda ukuthi iyimbangela, umfana wangitshela ukuthi inja yakhe iyafana kodwa waxhuga ukuthi kungaba izinhlungu ezihlangene ngenxa yalokhu ayivelanga ku ama-x-ray. Ungitshele nge-cissus kamascosana, ukuthi inja yakhe isiyitholile futhi ngiyithengile.
Thenga ukwelashwa kwenyanga engu-1 ukuze uzame ukukwenza. Inja yami yaqala ukugijima futhi yeka ukuluma umlenze wayo.
UDaisy Carolina Trujillo Bonaga kusho
Sawubona, inja yami inenkinga yezinso futhi ngiyaqonda ukuthi yingakho izidladla zayo zivuvukile, ngiyinika i-fluorosemide. Iqiniso ukuthi akusona isilonda kuphela esingadala ukuvuvukala, kunezinye izimbangela, Ngiyabonga
Phendula uDaisy Carolina Trujillo Bonaga
Izindebe ezivuvukile enjeni: kusho ukuthini
Ingabe inja yami iphethwe yicicic?